Itoobiya Oo Gudaha Somalia Ka Qabatay Mid Ka Mid Ah Raggi Xasuuqa Ka Geystay D.D.S.I Ee Sida Weyn Loo Baadi Goobayay – Banaadir weyne
Ciidamada gaarka ah ee deegaanka Soomaali State ayaa shalay galab soo qabtay mid kamid ah ragga sida weyn ay u baadigoobayaan Maxkamaddaha dalka Itoobiya iyo Hay’addaha Xaquuqda Aadanaha ee horey u soo ahaa madaxii Xabsigii Cadaabka Aduunka loo bixiyey ee Jeel-Ogaadeen, oo hadda la xiray.
Xassan Ismaaciil Ibraahin (Xassan Dheere) oo ahaa madaxii hore ee Xabsiga Jeel-Ogaadeen ayaa shalay galab ciidamada Liyuu Police-ka ay ka qabteen gudaha Soomaaliya, gaar ahaana deegaano ku dhaw dhaw degmada Goldogob ee Puntland, sidda ay sheegayaan wararka laga helayo deegaanka.
Xassan Dheere oo kamid ahaa raggii kasoo muuqday warbixino ay baahiyeen Hay’addaha Xaquuqda Aadanaha ayaa muujinayay isagoo ciqaabaya dad deegaanka ah oo lagu soo qabtay in ay taageero u yihiin Jabhadda ONLF ama ay ka soo horjeedaan siyaasadda Itoobiya.
Maxkamaddaha sare ee dalka Itoobiya ayaa baadigoob ugu jira ku dhawaad 48 qof oo u badan dad ku eedaysayn falal Xaquuqda Aadanaha ka dhan ah, kuwaas oo dhamaantood gobalka Soomaali Galbeed ka geysta tacadiyo waa weyn.
Ninkan lasoo qabtay ayaa la baxsaday Hanti ay leedahay Itoobiya, waxaana la sheegay in halka laga soo qabtay lagula qabtay baabuur ay lahayd dawladda Itoobiya oo uu kala talaabay xadka labada dal. – Shaaciye News